မုန်တိုင်း Dagmar ကိုခြေရာခံ | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 28 ဒီဇင်ဘာလ, 2011 အားဖြင့် Holmbygden.se
မုန်တိုင်း Dagmar ပင် Holmes ခရိုင်အပေါ်အမှတ်အသားထား. အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်နေအိမ်န်းကျင်
ကျေးရွာပေါင်းသစ်ပင်လဲသေကြပြီ, အမှုအရာလွင့်ခဲ့ကြနှင့်များစွာသောကျေးရွာများရှည်လျားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများရှိခဲ့သည်. အတော်များများကသစ်တောပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ချစ်ပ်များ၏န့လေတိုက်ထောင်ချောက်ရာပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိထား.
Holmes အတွက် illuminated လမ်းကြောင်းသစ်ပင်များပြီးနောက် ofarbart နှစ်ဦးစလုံးအပုဒ်များနှင့်ဝါယာကြိုးများကျော်အခြေချခဲ့သည်. အလုပ် clean up လုပ်ဖို့ဆဲဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးပေါ်တွေ့မြင် အစီရင်ခံစာခန့်မှန်း အပန်းဖြေအတွက်လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်သည့်အခါကြည့်ဖို့.
ဘယ်လိုရက်ပေါင်းကြား၌မုန်တိုင်းပြီးနောက် Christina Hjelm နှင့် Leif Andersson ၏အိမ်တွင်ကြည့်ရှု. Dagmar အိမ်၏နောက်ကျောပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြောင်းသစ်ပင်များတစ် plockepin နှင့်အတူ. ရုံအိမ်သို့လမ်းဆင်းခဲ့ 40 သစ်ပင်, Christina ပြောပါတယ်.